Ahoana no hividianana fitsaboana anabolika an-dranomasina?
Misaotra anao mifandray aminay! Hifandray aminao amin'ny fotoana fohy, miverina an-trano pejy na jereo bebe kokoa entana.
Mpamorona na orinasa mpivarotra ve ianao?
Alefaso alefaso amin'ny mailaka ofisialy azafadyking@aasraw.com) ary ny fampisehoana dia homena, miaraka amin'ny fe-potoana fandoavam-bola.
Fanofanana nomena sy nomeraon'ny parcel sy adiresy nomena.
Ny entana dia alefa miaraka amin'ny laharana manaraka, mifampizara sary, andrana ny laharana ary ny daty fahatongana.
Fananana voaray sy manome valin-teny.
Ahoana no hanombohana baiko sy handoavam-bola?
Azonao atao ny mandefa anay ny baikon'ny fividianana raha manana, na mandefa fanamafisana tsotra amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny Trade Manager, avy eo dia handefa anao Proforma Invoice amin'ny antsipiriany momba ny banky ianao noho ny fanamafisanao ny fandoavam-bola amin'ny fangatahanao.
Eny, misy vokatra azo alefa toy ny samihafa maimaim-poana, fa raha mandoa ny vidin'ny fandefasana entana ianao.
Ahoana no ahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra alohan'ny hametrahana baiko?
Azo atao ny COA, HPLC, HNMR.
Ny fizahana taratasy avy amin'ny laboratoara fahatelo dia homena fotoana fohy.
Ahoana no hiarovana ny volako?
Ny lamina rehetra ho an'ny antsika ronono menaka Azo averina alaina mialohan'ny handefasana entana.
Ho an'ny fanonerana rehetra ho an'i AASraw, dia azo antoka fa halefa, handoavana, handefasana, na zavatra hafa azontsika mandritra ny taona 5.
Ahoana ny momba ny fotoam-pitaovana?
Tao anatin'ny 1 ~ 3 andro taorian'ny nanamafisana ny fandoavam-bola. (Fialan-tsasatra Sinoa tsy tafiditra).
Misy fihenam-bidy ve?
Eny, ho an'ny be dia be, manohana foana ny vidiny.
Afaka manome toky ny famatsiana angona ve ianao?
Ny fitaovana ampiasainay ao anaty kitapo dia nokarakarain'ny rafitra, izay manome antoka ny famatsiana amin'ny fotoana.
Tsy fantatrao ve ny fanazavana momba ny vokatra?
Ho an'ny antsipirihan'ilay vokatra, afaka mahita ny antsika isika vokatra tsipiriany ary lahatsoratra bilaogy Hisy valiny tsara